5 Tsara indrindra ony any Eoropa To Explore | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Tsara indrindra ony any Eoropa To Explore
5 Tsara indrindra ony any Eoropa To Explore
Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 02/07/2021)
Tsy maro fomba fitaterana tsara noho ny fiaran-dalamby, fa ny renirano Cruise tonga tsara tarehy akaiky! Izany dia tarehy sy ny fotoana handinihana ny manodidina fomba hahitana ny mahafinaritra Eoropa, nahita tanàna, faritra, ary ny firenena avy amin'ny fomba fijery vaovao. Afaka hijery toerana mahaliana izay mety ho hita raha tsy izany dia avy amin'ny andro tsy fiasana faritany haleha izy. Tsy mahagaga raha olona maro hisafidy ny Toerana mahafinaritra lalana hizaha ny 5 Tsara indrindra ony any Eoropa To Explore!
1 ny 5 Tsara indrindra ony any Eoropa: Danube
Length: 1,783 kilaometatra / 2,870km
Route: Alemaina – ny Black Ala any amin'ny Ranomasina Mainty
Makà renirano Danube Cruise raha mankafy ny tantara, tsara tarehy ny sakafo, ary traikefa tsy hay hadinoina. Namakivaky ny tanàna maoderina Amsterdam in Eoropa Andrefana ny Danube izay midina tsikelikely ho any Eoropa Atsinanana mandalo mari-toerana manan-tantara, toy ny Salzburg (ny tanànan 'mozika), na hitsambikina ho any hitsidika faharavana bara in Trendy Budapest. Eoropa ity famoriam-bola ny renirano Cruises dia handringana anareo ho any amin'ny toerana dreamlike feno fanandramana vaovao, zavatra hita, feo, fofona, and gastronomic encounters.
Salzburg ny Passau Lamasinina
2 ny 5 Tsara indrindra ony any Eoropa: Rhône
Length: 505 kilaometatra / 813km
Route: Nanketo Alpes eto Soisa any amin'ny Ranomasina Mediterane
Rhône River dia manan-tantara ony ny Soisa ary Frantsa ary iray amin'ireo renirano lehibe indrindra amin'ny Eoropa. Tsy mahagaga izany ao amin'ny lisitra ny The 5 Renirano tsara indrindra tany Eoropa mba hijery.
Izany no hany renirano lehibe tondra mivantana any amin'ny Ranomasina Mediterane ary efa nandray tamin'ny dia tsara Alpine. Izany no mahatonga azy tena samy hafa avy amin'ny avaratra namany, ny Rhin, izay mamela ny rehetra Alpine toetra ao ambadiky rehefa nandao Soisa. Ny Toerana mahafinaritra ary matetika bibidia Mazava ho azy fa ny Rhône, ny toetoetry ny rano mikoriana ao aminy, sy ny fomba izany dia efa ampiasain'ny olombelona rehetra no namolavola ny fitaoman eny an-tendrombohitra, tsara teo amoron'ny ony vava, antsanga izay manamarika ny Rhône amin'ny Alpine Glacier dia nentiny ho any amin'ny rano mafana kokoa ny Ranomasina Mediterane.
Zurich any Chur Lamasinina
3 ny 5 Tsara indrindra ony any Eoropa: Main
Length: 326 kilaometatra / 525km
Route: Kulmbach ho Mainz, Alemaina
Ny Main River no 327 kilaometatra ny lavany, ary ny renirano lava indrindra hita tanteraka amin'ny Alemaina. Mikoriana avy any atsinanana ka hatrany andrefana, ny Main mpikamban'ny Reniranon'i Rhin amin'ny Mainz, Alemaina. Ny tena River Manomboka ao Amin'ny Alan'i Franconia faritr'i Alemaina; na izany aza, ny renirano ihany no heverina navigable eo Bamberg ary Mainz.
In 1992 ny Main-Danube Canal nisokatra, izay mampifandray ny Main sy Danube Rivers. Ny lakandrano dia manomboka ao Bamberg sy mahafeno ny Reniranon'i Danube in Kelheim, Alemaina. Izany no heverina ho lehibe renirano izay mamela ny mpandeha sambo na ara-barotra sy ny fanaka kely mba handeha eo amin'ny Ranomasina Avaratra ny andrefana sy ny Ranomasina Mainty, any atsinanana.
4 ny 5 Tsara indrindra ony any Eoropa: ny
Length: 485 kilaometatra / 780km
Route: Any avaratrandrefan'i Dijon, Frantsa amin'ny anglisy Channel ny Le Havre
Maro ny tanàna manana endri-javatra izay mampiavaka azy ireo, mamaritra ny fisiantsika, ary miasa toy ny fitepon'ny fony izay mikoriana nitety ny tanàna tao am-po. Ny Seine River any Paris no Reniranon'i Tamise dia ny London, ny Danube any Budapest. Izany no ivon'ny, mifindra monina ny mpizahatany, izay mitandrina ny malaza manintona and capture memories.
A Seine Cruise dia tsy maintsy!
Mihevitra isika dia afaka misafidy ara-bakiteny fotsiny ny misy amin'ny Seine Cruises nanatitra ka dia tsy ho diso fanantenana! Ianao dia ho afaka ny hahita ny tsara indrindra Paris, ny tanàna ny fitiavana. Ny safidy malalaka miainga. Raha voafetra ny fotoana, Cruises dia natao ho antonona ao amin'ny fotoana fohy teo. Fa kokoa nametra-miverina Vibe, mankafy ny sakafo hariva Seine Cruise, faly mijery ny Tour Eiffel sy ny tranom-bakoka Louvre, rehefa sambo ny. Na dia afaka mitambatra ireo manintona sy Cruise ho irery ihany combo, hiakatra ho any amin'ny rihana faharoa, mahafinaritra ny hevitra, ary avy eo maka sambo lavitra, mankafy sakafo hariva sy ny vera divay. Azonao atao mihitsy aza maka ao amin'ny Moulin Rouge mampiseho raha tena mihaja? Raha te-hijery ny tena Paris, ny Seine Cruise dia tsy maintsy.
Farany Haka Fa Eoropeana Rivers – Anarana iombonana Waterways
Length: 528 kilaometatra / 850km
Route: The Netherlands any amin'ny Ranomasina Avaratra
Ny renirano kely, lakandrano, ary ny ranomasina afovoan'i Holandy no mandrafitra ny Lalan-drano Holandey, ary cruising eto dia ny miala voly fomba hijery Eoropa sy ny namono firenena ambany. Fitsangantsanganana manodidina ny tanànan'i Amsterdam sy Rotterdam matetika miseho eo amin'ny itineraries, fa ny nisongadina ny Zavatra Waterways river Cruise dia ny andiam- 19 Windmills marina izay hamaritana ireo lakandrano banky ao amin'ny faritr'i Kinderdijk. Get ny fakan-tsary vonona.
Koa mahagaga ny fampisehoana ny voninkazo amin'ny Keukenhof, voninkazo lehibe indrindra zaridaina. Nanelatrelatra karipetra ny loko no namorona ny fito tapitrisa tulips, daffodils, ary ny voninkazo hafa - amin'ny tsara indrindra ao amin'ny volana aprily sy mey. Tandremo fa fohy Cruises amin'izao fotoana ny taona manokana mifantoka amin'ny saha jiro ny Holandey.
sambo rehetra! Boky izay mampiofana ny tapakila mankany amin'ny dia ataonao Save A Train androany ary lasa mitsangantsangana!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Tsara indrindra ony any Eoropa To Explore” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-rivers-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Train Travel China, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel Russia, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe, Travel Tips
Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe